दक्षिण अफ्रीकी खेलाडीले गरे १९ औं विश्वकपको पहिलो गोल | Home
दक्षिण अफ्रीकी खेलाडीले गरे १९ औं विश्वकपको पहिलो गोल
Posted on June 14, 2010 by Yonepal	फुटबल खेलको महाकुम्भ मानिने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको प्रारम्भीक खेल बराबरीमा सकिएको छ। शुक्रबार दक्षिणअफ्रीकाको जोहनेसवर्गस्थित सकरसिटीमा भएको मेक्सीको र दक्षिणअफ्रीकाबीचको खेल बराबरीमा सकिएको हो।
सो खेलको ५५ औं मिनेटमा आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रीकी ८ नं. जर्सीका
खेलाडी Siphiwe Tshabalala ले उन्नाइसौं विश्वकपको पहिलो गरेका थिए । उनको गोलपछि दक्षिण अफ्रीकी फ्यानहरुमा हर्षको वर्षा भएको थियो।
त्यसको २४ मिनेटपछि ७९ औं मिनेटमा मेक्सिकन ४ नं. जर्सीका खेलाडी Rafael Marquez ले आफ्नो पक्षमा दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध एक गोल गरेर खेललाई बराबरीमा पुर्‍याए । त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन । अन्ततः खेल बराबरीमा सकियो। १९ औं विश्वकपको पहिलो गोल कर्ता Siphiwe Tshabalala म्यान अफ दी म्याच चुनिएका थिए ।
विश्वकप फुटबलमा यसवर्ष ३२ राष्ट्रहरुको सहभागीता रहेको छ। जसमा ६४ खेल हुनेछन्। दक्षिण अफ्रिकाले विश्वकप आयोजनाका लागि नौ शहरमा दश वटा रंगशाला तयार पारेको छ। उद्घाटन र समापन खेल भने जोहानेसवर्गस्थित सकरसिटी रंगशालामा हुनेछ ।
विश्वकप इतिहासमा ब्राजिल सर्वाधिक सफल टिम हो। ब्राजिलले पाँच पटकसम्म उपाधि जितिसकेको छ। दोस्रोमा चार पटकसम्म डिफेण्डिङ च्याम्पियन बनेको इटली रहेको छ। एकमहिना सम्म चल्ने फुटबलको महासंग्रामको फाइनल खेल जुलाइ एघारमा हुनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिने राष्ट्रहरुलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा दक्षिण अमेरिकाका पाँच, उत्तर अमेरिकाका तीन, ओसनियाका एक, अफ्रिकाका आयोजनकसहित ६, यूरोपका तेह्र र एसियाका चार टिमको सहभागीता रहेको छ। फुटबल प्रतियोगिता आयोजक भएकोले दक्षिण अफ्रिकाले स्वतः प्रवेश पाएको हो। mr.deepakbasnet@ymail.com
Filed under: SPORTS Tagged: | दीपक बस्नेत	« विश्वकपमा सार्वजनिक गरिएका तीन कुरा पहिलो दिनको दुवै खेल बराबरी »